LUNGISA LE PC AYINAKHO UKUQHUBA IMPAZAMO YEWINDOWS 11 - ITHAMBILE
Ayikwazi ukufaka Windows 11 kwaye ufumane le PC ayinakuqhuba Windows 11 impazamo? Nantsi indlela yokwenza i-TPM 2.0 kunye ne-SecureBoot, ukuze kulungiswe le PC ayinakuqhuba ngeWindows 11 impazamo kwi-PC Health Check application.
Uhlaziyo ekudala lulindelwe Windows 10, esona sixhobo sisebenza kakhulu sekhompyuter kwihlabathi liphela, sagqityelwa ukubhengezwa nguMicrosoft kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo (ngoJuni 2021). Njengoko kulindelwe, iWindows 11 iya kwazisa ngemininzi yezinto ezintsha, usetyenziso lwendalo, kunye nomsebenzisi jikelele uya kufumana uyilo olubonakalayo, ukuphuculwa kwemidlalo, inkxaso yezicelo ze-Android, iiwijethi, njl njl. , kunye neVenkile kaMicrosoft iphinde yahlaziywa ngokupheleleyo kuhlobo lwamva nje lweWindows. Okwangoku Windows 10 abasebenzisi baya kuvunyelwa ukuba baphucule Windows 11 ngaphandle kweendleko ezongezelelweyo ekupheleni kuka-2021, xa ingxelo yokugqibela yenziwe ifumaneke eluntwini.
Amanyathelo okulungisa ukuba iPC yakho ayinakuqhuba ngeWindows 11 impazamo
Iimfuneko zeNkqubo yeWindows 11
Indlela 1: Uyenza njani i-TPM 2.0 kwi-BIOS
Indlela yesi-2: Nika amandla iBoot ekhuselekileyo
Ngokudibanisa lonke utshintsho oluza kuziswa yiWindows 11, iMicrosoft ikwatyhile ubuncinci beemfuno zekhompyuter zokuqhuba i-OS entsha. Zezi zilandelayo:
Iprosesa yangoku ye-64-bit enesantya sewotshi ye-1 Gigahertz (GHz) okanye ngaphezulu kunye ne-2 okanye ngaphezulu kwe-cores (Nalu uluhlu olupheleleyo lwe Intel , I-AMD , kunye Iiprosesa zeQualcomm eya kuba nakho ukuqhuba iWindows 11.)
Ubuncinci i-4 gigabytes (GB) ye-RAM
I-64 GB okanye isixhobo esikhulu sokugcina (i-HDD okanye i-SSD, nokuba yeyiphi na iya kusebenza)
Umboniso ngesisombululo esisezantsi se-1280 x 720 kwaye sikhulu kune-intshi-9 (kwidayagon)
Inkqubo ye-firmware kufuneka ixhase i-UEFI kunye ne-Boot ekhuselekileyo
Imodyuli yeQonga elithembekileyo (TPM) inguqulelo 2.0
Imizobo yeKhadi kufuneka ihambelane neDirectX 12 okanye kamva nomqhubi weWDDM 2.0.
Ukwenza izinto zibe lula kwaye zivumele abasebenzisi ukuba bajonge ukuba iinkqubo zabo zangoku ziyahambelana na Windows 11 ngokucofa kanye, iMicrosoft ikhuphe Impilo yeKhompyuter yokujonga usetyenziso . Nangona kunjalo, ikhonkco lokukhuphela lesicelo alisekho kwi-Intanethi, kwaye endaweni yoko abasebenzisi banokufaka umthombo ovulekileyo Kutheni uNotWin11 isixhobo.
Abasebenzisi abaninzi abakwazileyo ukufaka usetyenziso lwe-Health Check baxele ukuba bayifumene le PC ayinakho ukuqhuba Windows 11 umyalezo ozivelelayo xa uqhuba itsheki. Umyalezo ozivelelayo ubonelela ngolwazi oluthe kratya malunga nokuba kutheni iWindows 11 ingenakusebenza kwinkqubo, kwaye izizathu zibandakanya- iprosesa ayixhaswanga, indawo yokugcina ingaphantsi kwe-64GB, i-TPM kunye ne-Boot ekhuselekileyo ayixhaswanga / ayikhubazekanga. Ngelixa ukusombulula imiba emibini yokuqala kuya kufuna ukutshintsha izinto zehardware, imiba ye-TPM kunye ne-Boot ekhuselekileyo inokuconjululwa ngokulula.
Imodyuli yeQonga elithembekileyo okanye i-TPM sisixhobo sokhuseleko (i-cryptoprocessor) esibonelela ngemisebenzi esekwe kwizixhobo zekhompyuter, ezinxulumene nokhuseleko kwiikhompyuter zangoku zeWindows ngokugcina ngokukhuselekileyo izitshixo zokubethela. Iitshipsi ze-TPM zibandakanya iindlela ezininzi zokhuseleko lomzimba ezenza kube nzima kubaduni, usetyenziso olubi, kunye neentsholongwane ukuzitshintsha. UMicrosoft ugunyazisile ukusetyenziswa kwe-TPM 2.0 (inguqulelo yamvanje yeetshipsi ze-TPM. Le yangaphambili ibibizwa ngokuba yi-TPM 1.2) kuzo zonke iinkqubo ezenziwe emva kwe-2016. Ke ukuba ikhompyuter yakho ayisiyo eyakudala, kusenokwenzeka ukuba i-chip yokhuseleko ithengiswe kwangaphambili kwibhodi yakho yomama kodwa ikhubazekile.
vpn iqhagamshelwe kodwa akukho ukufikelela kwi-intanethi
Kwakhona, imfuneko ye-TPM 2.0 ukuze isebenze Windows 11 ibambe uninzi lwabasebenzisi ngokungalindelanga. Kwangoko, uMicrosoft wayedwelise i-TPM 1.2 njengeyona mfuno iphantsi yezixhobo kodwa kamva wayitshintshela kwi-TPM 2.0.
Itekhnoloji yokhuseleko ye-TPM inokulawulwa kwimenyu ye-BIOS kodwa ngaphambi kokuqalisa kuyo, masiqinisekise ukuba inkqubo yakho ixhotyisiwe nge-TPM ehambelana ne-Windows 11. Ukwenza oku -
1. Cofa ekunene kwiqhosha lokuqala lemenyu kwaye ukhethe Qhuba kwimenyu yomsebenzisi wamandla.
Itunes ayiziboni iphone windows 10
2. Chwetheza tpm.msc kumhlaba wokubhaliweyo kwaye ucofe ku Kulungile iqhosha.
3. Lindela ngomonde uLawulo lwe-TPM kwisicelo seKhompyuter yaseKhaya ukuba sisungule, jonga Ubume kwaye i Ingcaciso yohlobo . Ukuba icandelo lesimo libonisa 'i-TPM ikulungele ukusetyenziswa' kwaye inguqulelo ingu-2.0, usetyenziso lwe-Windows 11 lokujonga iMpilo inokuba yeyona iphosakeleyo apha. UMicrosoft uqobo uwujongile lo mbandela kwaye usithathile isicelo. Inguqulelo ephuculweyo ye-Health Check app iya kukhutshwa kamva.
Funda kwakhona: Yenza okanye Khubaza ukungena ngokukhuselekileyo Windows 10
Nangona kunjalo, ukuba imeko ibonisa ukuba i-TPM icimile okanye ayifumaneki, landela la manyathelo angezantsi ukuyenza:
1. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, i-TPM inokwenziwa kuphela kwimenyu ye-BIOS / UEFI, ke qala ngokuvala zonke iiwindows ezisebenzayo windows kwaye ucinezele. I-Alt + F4 nje ukuba ukwidesktop. Khetha Cima kwimenyu yokukhetha kwaye ucofe ku-Kulungile.
windows ayinakuqhagamshela kumshicileli. ukungena akuvunyelwanga
2. Ngoku, qala ikhompyuter yakho kwaye ucofe iqhosha le-BIOS ukungena kwimenyu. Inkqubo ye- Isitshixo seBIOS yahlukile kumenzi ngamnye kwaye ingafunyanwa ngokwenza uphando olukhawulezileyo kuGoogle okanye ngokufunda incwadana yomsebenzisi. Izitshixo eziqhelekileyo zeBIOS ziF1, F2, F10, F11, okanye Del.
3. Nje ukuba ungene kwimenyu yeBIOS, khangela ifayile ye Ukhuseleko ithebhu / iphepha kwaye utshintshele kulo usebenzisa amaqhosha etolo yebhodi yezitshixo. Abanye abasebenzisi, ukhetho loKhuseleko luya kufumaneka phantsi kweZicwangciso eziPhambili.
4. Emva koko, khangela indawo Useto lwe-TPM . Ileyibhile ngqo inokwahluka; umzekelo, kwezinye iinkqubo ezixhotyiswe nge-Intel, isenokuba yi-PTT, iTekhnoloji yeQonga le-Intel, okanye ukhuseleko lwe-TPM ngokulula kunye ne-fTPM koomatshini be-AMD.
5. Cwangcisa Isixhobo se-TPM ubume kwi Iyafumaneka kwaye Urhulumente we-TPM ukuya Inikwe amandla . (Qiniseka ukuba awungcolisi nayiphi na into enxulumene ne-TPM.)
6. Gcina useto olutsha lwe-TPM kwaye uqalise ukusebenza kwakhona kwikhompyuter yakho. Sebenzisa iWindows 11 jonga kwakhona ukuqinisekisa ukuba uyakwazi ukulungisa le PC ayinakuqhuba ngempazamo yeWindows 11.
I-Boot ekhuselekileyo, njengoko igama lisitsho, luphawu lokhuseleko oluvumela kuphela isoftware ethembekileyo kunye neenkqubo zokusebenza ukuqala. Inkqubo ye- yemveli BIOS okanye i-boot yelifa iya kulayisha i-bootloader ngaphandle kokwenza naluphi na uhlolo, ngelixa langoku UEFA Itekhnoloji ye-boot igcina izatifikethi ezisemthethweni zikaMicrosoft kunye nokujonga yonke into ngaphambi kokulayisha. Oku kuthintela i-malware ekuphazamiseni inkqubo yokuqalisa kwaye, ngenxa yoko, kukhokelela kuphuculo lokhuseleko ngokubanzi. (I-boot ekhuselekileyo iyaziwa ukuba ibangela imiba xa ubamba ulwabiwo oluthile lweLinux kunye nenye isoftware engahambelaniyo.)
Ukujonga ukuba ikhompyuter yakho iyayixhasa na itekhnoloji ye-Boot ekhuselekileyo, chwetheza msinfo32 kwibhokisi yoMyalelo oSebenzayo (Windows logo iqhosha + R) kwaye hit hit.
Jonga ifayile Khusela iBoot State ileyibheli.
Ukuba ifundeka 'ayixhaswanga,' ngekhe ukwazi ukufaka iWindows 11 (ngaphandle kobuqhetseba); kwelinye icala, ukuba ifundeka ngolu hlobo ‘Cimayo,’ landela la manyathelo angezantsi.
1. Ifana ne-TPM, iBoot ekhuselekileyo inokuvunyelwa ngaphakathi kwimenyu yeBIOS / UEFI. Landela amanyathelo 1 no-2 wendlela yangaphambili ukuya faka imenyu yeBIOS .
2. Tshintshela kwi Ifayile yeBoot tab kunye Yenza iBoot ekhuselekileyo usebenzisa izitshixo zotolo.
Abanye, ukhetho lokwenza ukuba iBoot ekhuselekileyo ifumaneke ngaphakathi kwimenyu ePhambili okanye yoKhuseleko. Nje ukuba wenze i-Boot ekhuselekileyo, umyalezo ocela ukuqinisekiswa uya kuvela. Khetha ukwamkela okanye u-Ewe ukuqhubeka.
windows 10 uhlaziyo lomncedisi onamathele kwiipesenti ezingama-99
Phawula: Ukuba ukhetho olukhuselekileyo lweBoot lukhutshiwe, qinisekisa ukuba imowudi yeBoot isetelwe kwi-UEFI hayi kwilifa.
3. Gcina ukuguqulwa kunye nokuphuma. Akusayi kuphinda ufumane le PC ayinakho ukuqhuba umyalezo wempazamo yeWindows 11.
UMicrosoft ngokufanelekileyo uphinda kabini ezokhuseleko kunye nemfuno ye-TPM 2.0 kunye ne-Boot ekhuselekileyo ukulungiselela iWindows 11. Nokuba kunjalo, ungakhathazeki ukuba ikhompyuter yakho yangoku ayizifezekisi ezona mfuno zisezantsi zeWindows 11, njengoko ukusebenza kwimicimbi yokungahambelani kuqinisekile kucingelwe nje ukuba kwakhiwe okokugqibela i-OS. Unokuqiniseka ukuba siza kuyigubungela loo mi sebenzi nanini na xa ifumaneka, kunye nezinye izikhokelo zeWindows 11.
susa ibhokisi yomdlalo weXbox
i-itunes ayinakunxibelelana nale iphone kwenzeke impazamo engaziwayo 0xe800000a
windows 10 ibar yomsebenzi eyaphukileyo